पुजाले खोलिन सपना र बिनयको स’म्बन्धको बारेमा, पुजालाई किन भनियो कान्छी श्रीमती ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/पुजाले खोलिन सपना र बिनयको स’म्बन्धको बारेमा, पुजालाई किन भनियो कान्छी श्रीमती ?
पुजाले खोलिन सपना र बिनयको स’म्बन्धको बारेमा, पुजालाई किन भनियो कान्छी श्रीमती ?
काठमाडौ, बिबिसीले विश्वका प्र’भावशाली १०० महिलाको सू’चीमा राखेकी सपना रोकाले दिएको उ’जुरीका आ’धारमा वि’नयजंग बस्नेत प’क्राउ परेका छन् । विनयजंगले सपनाको नाँ’गो त’स्बिर मेरो मोवाइल र पे’नड्राइभमा छ म आ’वश्यक पर्यो भने सार्वजनिक ग’रिदिन्छु भनेर ध’म्की दिए पछि सपनाले प्र’हरीमा उ’जुरी दिएकी थिइन् ।
सपना र विनयजंग वे’वारिसे श’व ब्य’वस्थापनमा केही समय सं’गै काम गर्थे । तर पछिल्लो समय उनीहरुबीच स’म्बन्ध वि’ग्रिएपछि अहिले सपनाले आफ्नो छु’ट्टै सं’स्था दर्ता गरेर काम थालेकी छन् । उनले छुट्टै काम थालेपछि सपनासंग विन’यजंगको स’म्बन्ध थ’प वि’ग्रियो ।
त्यसैवेला सपनाको बुवाआमाले उनीहरुको स’म्बन्धमा बारेमा केही नयाँ कुरा खु’लाएपछि थ’प चर्चा भएको थियो । यस विषयमा पहिलो पटक वि’नयजंगको प्रे’मिका भनिएकी पुजा विकले खुलाएकी छन् । पुजाले सपना र वि’नयजंग बुवा छोरीकै स’म्बन्धमा रहेको र विनयजंगले स’पनाका पूर्व श्रीमान दा’वी गरेका ब्य’क्तिले वि’नयजंगलाई सप’नाको त’स्बिर पठाएको आफुले थाहा पाएको बताएकी छन् ।
उनले विन’यजंग रि’ह्याव से’न्टरमा जाँ’दा विनयजंगको मोवाइल हेर्दा त्यस्ता त’स्बिर आफुले पनि देखेको बताएकी छन् । ति त’स्विर स’पनाको पूर्व पति भनेर दा’वी गरेका ब्य’क्तिले नै विनयजंगलाई प’ठाएको उनको भनाई छ । उनले वुवाआमाले पनि सपना र विनयजंगको स’म्बन्धका बारेमा ग’लत बु’झाई राखेको बताएकी छन् ।